Sida loo doorto ereyo muhiim u ah ganacsigaaga Amazon?
In our post posts, waxaan wax badan ku qoray wax ku saabsan optimized optimization Amazon, gaar ahaan ku saabsan cinwaanka iyo sharaxaad ka bixinta, urur sax ah ee dhibcoodka iyo qaar kale. Si kastaba ha ahaatee, ma aanan u wareejin maqaalkan oo dhan mawduuca cilmi-baarista muhiimka ah ee ku saabsan liiskaaga Amazon. Waa mawduuc muhiim ah oo u baahan dareen gaar ah maaddaama ay tahay meeshii laga bilaabi lahaa dhammaan wacyigelinta gawaarida Amazon raadinta. Iyo xitaa haddii aad dareento inaad ogtahay wax walba oo ku saabsan cilmi-baarista muhiimka ah ee Amazon, mararka qaarkood waxay ka caawisaa in ay lahaadaan liis kooban oo ku saabsan tixraaca. Maqaalkani, waxaanu samaynay liis ah waxa aynu u malaynayno inuu yahay qodobbada muhiimka ah ee la raacayo marka ay timaado raadinta moobiilka iyo cilmi-baarista muhiimka ah. Haddaba, aynu sii socono! Hagaha Amazon SEO
Samee liis gareyntaada adiga oo isticmaalaya isticmaalaha
) Waxa laga yaabaa inay tahay qaybta ugu muhiimsan ee kor u qaadida ganacsiga e-ganacsiga haddii aad ganacsigaaga ku samayso Amazon ama makiinadaha kale ee raadinta - bateria evod 1100mah starter. Si kastaba ha ahaatee, waxaa habboon in la xuso in makiinadaha raadinta ee kala duwan ay dalbadaan waxyaabo kala duwan. Taasi waa sababta aad maskaxda ku hayso in haddii aad kor u qaadeyso alaabtaada Amazon, waxaad u baahan tahay inaad bartilmaameed u ahaato dhagaystayaasha gaarka ah oo aadna ugu qeexan xulashada qaybaha iyo qaybaha hoose. Farqiga kale waa in aad tahay inaad si faahfaahsan uga fiirsato Amazon in looga baahan yahay makiinadaha kale ee raadinta sida Google ama Bing.
Ogow baahiyahaaga dhagaystayaasha ah ee aad rabto iyo waxaad doorbidayso
Ku sii wadidda cutubka hore, waxaan jeclaan lahaa in la ogaado in aad ogtahay waxa aad Amazon ku beegsanayso dhagaystayaasha waa raadin. Halkan waxaan ka hadleynaa xulashada ereyada raadinta ee la beegsanayo. Ma aha kiis la isku daro liiska guud ee keywords Amazon sida "dharka," "buugaagta," iyo wixii la mid ah. Ma aha macquul in la isticmaalo erayada guud ee loogu talagalay kobcinta alaabtaada gaar ahaan haddii aad dhawaan ganacsigaaga ku samaysay Amazon. Taa baddalkeeda, waa inaad la timaadaa qaybaha ereyada muhiimka ah oo ku saleysan cilmi-baaristaada oo hoos u dhigaysa baaxadda. Waxay micnaheedu tahay in aad u baahan tahay inaad ku dhufatid ereyada raadinta muddada dheer, sida "ragga", "dharka dumarka uurka leh" iwm.
Maskaxda ku hay qaabdhismeedka SEO ( 10)
Si aad ugu guulaysato Amazon, waxaad u baahan tahay inaad adeecdo qaabka SEO-ga Amazon. Amazon waxay leedahay sharciyo u gaar ah sida iibiyeyaashu u soo galaan macluumaad ku saabsan waxyaabaha ay ku qoran yihiin liiska. Haddii la barbardhigo Google, waa sahlan tahay in aad ganacsi ku sameysid Amazon sababtoo ah Amazon horey u qabatay cilmi baaris. Ujeedada ugu muhiimsan ee Amazon waa inay iibiso alaabada badan ee suurtogalka ah, waxay rabaan noocyo gaar ah oo ah shuruudaha iyo weedhaha raadinta si ay u helaan meeleyn gaar ah liiska iibiyaha si ay si wanaagsan ugu beddelaan..
Ku siinta raadinta macluumaadka ugu badan ee suurtogalka ah
Xusuusnoow in qayb kasta oo ka mid ah liiskaaga Amazonagu uu bannaanaado sabab la'aan. Haddii aad sameysey, ka dibna macluumaadka halkaa waa la joogaa. Waxay muujinaysaa wax-qabad la'aantaada waxayna sababtaa shaki. Haddii aad sameysey, markaa waxaad horey u ogtahay dhammaan macluumaadka loo baahan yahay oo u ekaado karti leh. Khariidadaha bannaan ee ku qoran liiskaaga ayaa ka dhigi kara macaamiishaada mustaqbalka inay ka boodaan dalabkiina oo ay noqdaan macaamil ka mid ah kuwa tartanka ku jira. Taasi waa sababta ay tahay inaad u fidiso raadiyaha wixii ay raadinayaan.
Sida loo doorto ereyada muhiimka ah ee Amazon?
Maxay yihiin faa'iidooyinka ereyada muhiimka ah ee ereyada dheer?
Sida aan uga soo horjeedo ereyada muhiimka ah ee dheeraadka ah ee ku saabsan Amazon waa waddo loo maro wax kasta oo bilaabmaya iyo ganacsiyada yaryar. Haddii aad jeclaan lahayd inaad alaabtadaada ka dhigto bogga natiijooyinka raadinta, hubi inaad bartilmaameed ka dhigato shuruudaha raadinta ee ku haboon iyo muddada dheer. Guud ahaan ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah waa erayada kuwaas oo ay ku jiraan ereyo saddex ama kabadan oo raadin ah oo si kooban u sharaxaya waxa aad iibiso. Sida laga soo xigtay xogta tirakoobka, ereyada muhiimka ah ee qoraalka dhaadheer waxay ka kooban yihiin qiyaastii seddex meelood oo ah raadiyeeyaal online ah. Taasi waa sababta ay tahay go'aanka caqli-gal ah ee lagu sameeyo cilmi-baaris suuqa ah si loo abuuro liiska ugu muhiimsan ee shuruudaha raadinta dheeraadka ah ee ganacsigaaga.
Waxaa jira saddex siyaabood oo asaasi ah sida aad u heli karto liis ah raadinta raadraaca Amazon ee la beegsaday.
Ugu horreyntii, waxaad ku baadhi kartaa iyaga gacanta. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad maskaxda ku haysaa in ay tahay geedi socod waqti wakhti u baahan oo u baahan aqoon gaar ah, iyo qaababka suuqyada fahamka.
Siyaabo kale oo aad adigu u sameyn kartid ereyada cilmi-baarista ah waa inaad qorto khabiir SEO ah ama la-taliye kaas oo ku takhasusay wanaajinta Amazon. Waxaan kugula talinaynaa inaad ku tiirsanaato Khubaro khabiir haddii aad jeceshahay inaad hesho taageero xirfadeed oo aad ka dhigto ganacsigaaga Amazon. Waxaad u baahan tahay inaad bixiso lacag-bixinta hal-mar ah ee adeegga tamarta oo ay ka mid yihiin soo-jeedinaha soo-saarka leh ee soo-saarka, olole xiriirin oo taabogal ah, illaa 100 shuruudo raadin oo lagu raadinayo Google TOP10, qiimeynta uruurinta isbeddelka, khaladaadka SEO-ga oo la hubiyo, iyo arrimaha kale ee maareynta arrimaha.
Ugu dambeyntii, waxaad isticmaali kartaa barnaamijka internetka loogu talagalay cilmi-baarista muhiimka ah ee ganacsigaaga Amazon..Ujeeddooyinkan waxaad isticmaali kartaa qalabkan la caddeeyey sida Qorshaha Keydka Google (ku siin doona xog aan sax aheyn iyada oo ku saleysan raadinta Google badan); Keywordtool.io (waxa ay la mid tahay Qorshaha Keydka Google ee kuugu jira oo ku siinaya fikrado muhiim u ah Amazon); Jungle Scout (qalabkani wuxuu ku siin karaa macluumaadka muujinaya ereyada muhiimka ah ee keena iibka ugu badan).
Sidee loo sharxaa ereyo muhiim ah sida ku xusan tartanka?
Sida aad ogtahay, Amazon waa suuqa aadka loogu tartamayo oo ah shuruudaha raadinta ay ku tartamayaan midba midka kale, hawshaada koowaadna waa inaad jebiso baqashada. Waa inaad raadisaa shuruudaha raadinta qadarka sare leh oo leh tartan tartiib tartiib ah. Si kastaba ha noqotee, ma aha hawl fudud oo lagu heli karo kalmadahaas oo kale, nasiib daro, qalab cilmi-baaris online ah ayaa ku siin kara iyaga. Taasi waa sababta aad ugu baahan tahay bukaanka iyo adkeysiga si aad u xakameyso iyaga gacanta.
Sidee ayaad uga soo horjeedda tartanka suuqa?
Waxay u dhawaaqi kartaa si dhab ah, laakiin wali waa run. Habka ugu fiican ee looga bixi karo tartankaaga Amazon Niche waa in la iloobo. Waa in aad gashaa labo indhoole ah oo aad horay u sii wado. Ha iskugu diyaarsamin heerarka kale oo ka fakar ujeedooyinka ganacsigaaga. Si kastaba ha ahaatee, macnaheedu maaha inaad iska indha tirto tartamayaashaada oo dhan. Waxaa macquul ah in la ogaado kor u kaca iyo hoos u dhaca, iyo waqti-ka amaahashada kiisaska suuq-galka shaqada. Si kastaba ha ahaatee, maskaxdayda, waxaa fiican inaad wakhtigaas ku bixiso istiraatiijiyada suuq-geynta Amazon. Fikradaha kama dambaysta ah
Hagahan hagaajinta gaaban ayaa kaa caawin doona inaad si wacan u qabato Amazon oo maskaxda ku hayso waxyaalaha lagama maarmaanka u ah joogitaanka amazon joogitaanka. Si kastaba ha noqotee, waa inaad isku daydaa inaad isku dheelitirto inta u dhexeysa helitaanka caanoboorka oo wali noqon mid gaar ah oo hal abuur leh. Taasi waa sababta aad u isticmaashid waxa aad si wax ku ool ah u shaqeyso oo aad maalin kasta ku dadaaleyso inaad ku soo celiso qorshahaaga Amazon. Natiijooyinku waxay muujinayaan waxa ay tahay inay noqdaan.